Boqortooyada Eebbe (Qaybta 1), Kaniisadda Adduunka Ee Caalamka Switzerland (WKG)
Boqortooyada Ilaah <abbr> (Qaybta 1)
Boqortooyada Ilaah had iyo goor waxay ahayd tan ugu badan ee waxbarista Masiixiyiinta, oo waa sax. Muran ayaa ka dhashay arintan, gaar ahaan qarnigii 20aad. Heshiiska way adagtahay in la gaadho sababta oo ah baaxadda iyo kakanaanta maaddooyinka kitaabiga ah iyo mowduucyo badan oo fiqi ahaaneed oo isku soo duway mawduucan. Waxaa sidoo kale jira kala duwanaansho ballaaran oo ku saabsan fikradaha ruuxiga ah ee hagaya culimada iyo wadaaddada oo u oggolaanaya inay gaaraan gunaanadka ugu badan.
Taxanahan 6-qaybood, waxaan kaga hadli doonaa su’aalaha udub-dhexaadka ah ee la xiriira Boqortooyada Ilaahay si aan u xoojino caqiidadeena. Markaan sidaas samaynayo, waxaan dib ugu dhici doonaa heerka aqoonta iyo aragtida dadka kale ee matalaya isla, taariikh ahaan la cadeeyay, caqiidada masiixiga ee caadiga ah ee aan u heellanay hay'adda caalamiga ah ee loo yaqaan 'Grace Communion International', oo ah diin ku saleysan Qorniinka oo loo tarjumay diiradda xagga Ciise Masiix waa. Isagu waa kan innaga hagaya cibaadadayada Ilaaha saddexanka ah, Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Qaabkan caqiidada, oo diiradda saaraya Beel-galnimada iyo Saddexda, ma awoodo inuu ka jawaabo su'aal kasta oo inaga quseysa oo ku saabsan Boqortooyada Ilaah, in kasta oo ay isku hallayn karto. Laakiin waxay bixin doontaa aasaas adag iyo tilmaamo la isku halleyn karo oo noo suurtogelin doonta inaan fahamno caqiidada Baybalka.
100-kii sano ee la soo dhaafay, waxaa jiray heshiis sii kordhaya oo dhex mara baarayaasha Kitaabka Quduuska ah ee ku saabsan su'aalaha muhiimka ah ee iimaanka ee wadaaga dareenka aasaasiga ah ee fiqi ahaaneed ee annaga noo ah. Waxay ku saabsantahay runnimada iyo isku hallaynta waxyiga kitaabiga ah, hab macquul ah oo loo fasiro tarjumaadda Baybalka, iyo aasaaska fahamka masiixiga (Doctrine) ku saabsan su'aalaha sida ilaahnimadiisa ee Masiixa, Saddexanka Ilaah, meesha udub dhexaadka ee nimcooyinka Ilaah sida ay u rumaysantahay Masiixu Ruuxa Quduuska ah, iyo shaqada madax furashada ee macnaha guud ee taariikhda si wax looga qabto Hadafka Ilaahay, ujeedada dhamaadka, waa la fulin doonaa.
Haddii aan si midho dhal ah u adeegsan karno waxbarista aqoonyahanno fara badan, laba hagitaan ayaa u muuqda kuwa si gaar ah waxtar ugu leh mideynta maragyada tirin ee kitaabiga ah ee ku saabsan Boqortooyada Ilaah Ku dar (isku-darka) wada-jirka guud: George Ladd, oo wax ka qora aragtida cilmi-baarista Kitaabka Quduuska ah, iyo Thomas F. Torrance, oo matalaya fiqiga iyo tabarucaaddiisa. Dabcan labadan aqoonyahan waxay ka barteen kuwa kale oo badan waxayna tixraac ugu yeelaan fikirkooda. Waxaad fiirisay buugga baarista ee kitaabiga ah iyo maadooyinka cilmi ahaanta.
Markii ay sidaas samaynayeen, waxay diiradda saareen Qorniinkaas kuwa u dhigma asaaska, kitaabiga ah, iyo fiqi ahaaneed ee kor ku xusan oo ka tarjumaya doodaha ugu macquulsan, la fahmi karo, iyo doodaha guud ee ku saabsan Boqortooyada Ilaah. Qaybteyda, waxaan ka hadli doonaa dhinacyada ugu muhiimsan ee natiijooyinkooda kuwaasoo naga caawin doona inaan koreyno oo aan fahamno iimaankeenna.
Micnaha udub dhexaadka ah ee Ciise Masiix
Ladd iyo Torrance labaduba waxay si cad u caddeeyeen muujinta kitaabiga ah in si aan kala sooc lahayn ay u qeexeyso boqortooyada Ilaah shakhsiga iyo badbaadada Ciise Masiix. Isaga laftiisu wuu xidhaa oo wuu keenaa. Sabab? Maxaa yeelay isagu waa boqorka uunka oo dhan. Shaqadiisa ruuxiyan ahaaneed ee udhexeysa uunka iyo abuurista, boqornimadiisa waxaa kujira waxyaalo wadaado iyo waxyaabo sheegid. Boqortooyada Ilaah runti waxay la jirtaa iyo xagga Ciise Masiix; maxaa yeelay isagaa xukuma meel kastoo uu joogo. Boqortooyada Ilaah waa boqortooyadiisa. Ciise ayaa noo sheegaya: "Oo waxaan doonayaa inaan boqortooyada kuu lahaado, sida aabbahay iigu xilsaaray, inaad cuntid oo aad cabtaan miiskayga oo boqortooyadayda ku jira oo waxaad ku fadhiistaan ​​carshiyo oo aad ku xukuntaan laba-iyo-tobanka qolo oo Israa'iil." (Luukos 22,29-30).
Waqti kale, Ciise wuxuu caddeeyaa in boqortooyada Ilaah ay iska leedahay. Wuxuu ku hadlay: "Boqortooyadaydu waa dunidan" (Yooxanaa 18,36). Markaa, boqortooyada Ilaah looma fahmi karo cidda uu yahay Ciise iyo waxay tahay waxa ku saabsan shaqadiisa badbaadada. Fasiraad kasta oo ka mid ah Qorniinka Quduuska ah ama waxkastoo fiqi ahaaneed oo ah shey wax tar ah oo aan ka tarjumeynin boqortooyada Ilaah oo ku saleysan qofka iyo shaqada Ciise Masiix sidaas darteed wey ka guureysaa xarunta barashada Masiixiga. Waxay lama huraan u noqon doontaa gunaanad ka duwan kan ka shaqeeya xarunkan masiixiga.
Sideen uga baran karnaa bartanka dhexe ee nolosha si aan u fahamno waxa boqortooyada Eebbe ku saabsantahay? Ugu horreyn, waa inaan ogaano inuu Ciise qudhiisu ku dhawaaqayo imaatinka Boqortooyada Ilaahay oo xaqiiqadan ka dhigeyso mowduuc guud ahaan waxbariddiisa ah (Mark 1,15). Ciise Masiix jiritaanka dhabta ah ee boqortooyada ayaa ku bilaabmaya; kaliya ma gaarsiiso farriinta la xiriirta. Boqortooyada Ilaah waa run dhab ah oo laga dhex arki karo meel kastoo Ciise yahay; maxaa yeelay, isagu waa boqorka. Boqortooyada Ilaah runti waxay ku jirtaa joogitaanka nool iyo ficillada Boqor Ciise.
Laga bilaabo halkaan, waxkastoo Ciise ku hadlo iyo wuxuu gudbiya qaab dhismeedka boqortooyadiisa. Boqortooyada uu doonayo inuu na siiyo waa isku mid dabeecaddiisa. Wuxuu noo keenay nooc nooc boqortooyo oo leh boqortooyo qaabeeya qaabkeeda iyo ujeedadeeda. Marka fikradaheena ku saabsan Boqortooyada Ilaah waa inay la jaanqaadaa kan Ciise yahay. Waa inaad ku milicsataa wajiyada oo dhan. Waa in loo qaataa qaab ay dareemayaashayadu dhammaantood u tixraacaan oo noo xusuusiyaan isaga, si aan u fahamno in boqortooyadani ay isaga leedahay. Isaga ayaa iska leh oo saxeexiisa meelwalba leh. Waxay raacaysaa in Boqortooyada Ilaah ay ugu horreyntii ku saabsan tahay boqornimada ama xukunka Masiix, oo aan ahayn sida tarjumaadaha qaarkood ay soo jeedinayaan, oo ku saabsan adduunyada jannada ama goob dhul ama juqraafi ahaan. Meelkasta oo xukunka Masiix uu ku shaqeynayo hadba siduu doonayo iyo ujeedadiisa, waxaa jira boqortooyadii Ilaah.
Iskusoo wada duuboo, boqortooyadiisu waa inay ku xirnaataa aayaha mustaqbalkiisa si uu noqdo furaha oo sidaas daraadeed waxay la xiriirtaa uurkiisa, wakiilnimadiisa, iskutallaabta, sarakiciddiisa, kor u qaadiddiisa iyo ku soo noqoshada badbaadadeenna. Tan macnaheedu waa in xukunkiisii ​​boqornimadiisa looma fahmi karo inuu ka fogeeyo shaqadiisa mucjisooyinka iyo dhex dhexaadiyaha, kaasoo isagu ahaa nin nebi ah iyo wadaad. Dhamaan sedexdaan howlaha Axdiga Hore, sida ku xeran Muuse, Haaruun iyo Daa'uud, si gaar ah ayey ugu xiran yihiin uguna qanacsan yihiin isaga.
Xukunka iyo wuxuu ku qasban yahay soo jeedinta inuu kugula taliyo abuurkiisa, koofiyadiisa iyo naxariistiisa, taas oo ah, inuu ku lug yeesho waxa soo socda, bulshada iyo kaqeybgalka, adoo Ilaah nagala heshiinaya dhimashadiisa iskutallaabta. Ugudambeyntii, markii aan isku hoos gelinay koofiyaddiisa, waxaan ku qaybsanahay xukunkiisa oo aan ku raaxeysaneynaa ka qayb qaadashadiisa boqortooyadiisa. Dowladnimadiisu waxay la mid tahay astaamaha jacaylka Eebbe uu noogu keenayo Masiixa iyo aaminaadda Ruuxa Quduuska ah ee inagu dhex shaqeeya. Jacaylka Ilaah iyo jacaylka qof dariska ah, sida ku xusan Ciise, tani waxay muujineysaa ka qeyb qaadashadiisa boqortooyadiisa. Boqortooyada Ilaah waxaa lagu muujiyaa beel, dad, iyo bulsho axdi lala galay xagga Ilaah xagga Ciise Masiix iyo sidoo kale midba midka kale xagga ruuxa Rabbiga.
Laakiin jacaylka noocaas ah ee lagu dhex arko bulshada sida aan Masiixa ugu wadaagno waxay ka timaadaa aaminaad nool (Iimaanka) furashada, Ilaah ku nool iyo dowladdiisa, sida had iyo jeer Masiixu ugu dhaqmo. Markaa, rumaynta Ciise Masiix waa mid aan laga sooci karin iskudhafka boqortooyadiisa. Tani waa sababta oo ah Ciise keli kuma uusan sheegin in imaatinka Eebbe uu u soo dhowaan doono intuu yimid, laakiin sidoo kale wuxuu ku baaqay iimaan iyo kalsooni. Sidan ayaan u akhrinay: «Ka dib markii John la xidhay, Ciise wuxuu yimid Galili oo uu ku wacdiyey injiilka Ilaah oo yidhi:« Wakhtigii waa buuxsamay, oo boqortooyadii Ilaah waa timid. Toobad keena oo injiilka rumaysta! (Mark 1,14-15). Rumaynta boqortooyada Ilaah waxay si aan kala sooc lahayn ula xiriirtaa rumaynta Ciise Masiix. In lagu kalsoonaado waxay ka dhigan tahay ku tiirsanaanta xukunkiisa ama boqornimadiisa, boqortooyo-dhisiisa bulshada.
In la jeclaado Ciise iyo isaga oo leh Aabbaha waxaa loola jeedaa in la jeclaado oo la aamino dhammaan astaamaha naftiisa ee ka dhex muuqda boqortooyadiisa.
Xukunka boqortooyada ee Ciise Masiix
Ciise waa boqorka dhammaan boqorrada xukuma adduunka oo dhan. Kaliya hal gees oo kuyaal cosmos-yada oo dhan lagama tirtirayo awooddeeda si loo soo furto. Oo sidaas daraaddeed wuxuu ku dhawaaqay in la siiyey awood oo dhan oo jannada iyo Dhulka (Matayos 28,18), taasi waa, ka sarreeya abuur kasta. Wax walba waxaa loo abuuray isaga iyo isaga, sida uu Rasuul Bawlos u sharraxay (Kolosay 1,16).
Haddii ballanqaadyadii Ilaah ee Israa'iil loo soo sara kiciyey, Ciise Masiix waa "Boqorka boqorrada iyo Sayidka sayidyada" (Sabuurradii 136,1: 3-1; 6,15 Timoteyos 19,16; Muujintii). Wuxuu leeyahay awood buuxda oo istaahila; Waa isaga kan wax waluba isagaa abuuray, oo wax walba ku helaa xooggiisa iyo doonistiisa noloshiisa (Cibraaniyada 1,2: 3-1,17; Kolosay).
Waa inay cadaatay in Ciisahan, Eebaha Caalamka, uusan aqoonin cid kale, ama uusan jirin qof la tartamaya, ama xagga abuurista ama nimcooyinka qiimaha badan ee badbaadadeenna. In kasta oo ay jiraan taageerayaal, wax-wadeyaal ama wax adeegsan jiray oo aan lahayn awood ama rabitaan ay ku abuuraan oo ay ku noolaadaan, Ciise wuxuu soo wada saaray cadaawayaashii ka soo horjeeday xukunkiisa jilba joogsaday oo burburiyey. Isaga oo ah dhexdhexaadiyaha jidhka aabihiis, oo ah Wiilka Ilaah, ee ku xidhan Ruuxa Quduuska ah, wuxuu ka soo horjeedaa wax kasta oo u istaaga dariiqa abuurkiisa sida fiican loogu taliyay iyo aayaha Qaadirka ah ee uunka oo dhan. Ilaa iyo inta uu ka soo horjeedo dhammaan xoogaggaas wax u dhimaya ama burburaya abuurkiisa guusha leh ee ku hanjabaya inuu ka weecday hadafyadiisa cajiibka ah, wuxuu muujiyaa jacaylka uu u leeyahay abuuritaankan. Hadduusan ahayn inuu la dagaallamo kuwa doonaya inuu baabi'iyo, miyaanu isagu ahayn kii Rabbigu iyada jeclaa. Ciisahan, oo ay la joogaan Aabbihiis jannada iyo Ruuxa Quduuska ah, wuxuu si aan gabasho lahayn uga hor tagaa shar kasta oo dabakhaadha, carqaladeeya ama baabi'iya nolosha iyo jacaylka ku saleysan, xiriirka bulshada ku saleysan isaga iyo dib ula noqoshada midba midka kale iyo abuurista. Si ujeedkiisa asalka ah, aayatiintiisa ugu dambeysa loo fuliyo, dhammaan xoogagga ka hor imanaya xukunkiisa iyo xuquuqdiisa waa in loo dhiibo ama waa la baabi'in doonaa. Sharku mustaqbal kuma laha boqortooyada Ilaah.
Marka Ciise wuu is arkayaa, sidoo kale waxaa u muujiyey marqaatiyada Axdiga Cusub, oo ah guus madax furasho ah oo dadkiisa ka xoreysa sharkasta iyo cadaawayaasha oo dhan. Isaga wuu sii daayaa maxaabiista (Luukos 4,18:2; 2,14 Korintos). Wuxuu inaga kaxeeyaa xukunka gudcurka oo uu ugu wareejiyaa dowladdiisa iftiinka (Kolosay 1,13). Isaga "naftiisuu u bixiyay dembiyadeenna [...] inuu inaga badbaadiyo waqtigan xaadirka ah, dunida sharka ah sida ku jirta doonista Ilaah, Aabbeheenna ah" (Galatiya 1,4). Dareenkan waa in la fahmo in Ciise "[...] uu ka adkaaday dunida" (Yooxanaa 16,33). Hadana taas wuxuu ka dhigayaa “wax walba oo cusub!” (Muujintii 21,5: 19,28; Matayos). Baaxadda guud ee xukunkiisa iyo hoos u dhigga wixii shar ah oo dhan ee xukunkiisa ka sarreeya, mala awaalkayaga, waxay ka marag furayaan mucjisooyinka xukunkiisa boqornimada ee sharafta leh.
Waxaa qoray Gary Deddo
Boqortooyada Ilaah (Qaybta 1aad)